Ra'iisal wasaaraha oo magacaabay xubnaha lagu darayo Guddiyada Doorashada Dowlad Goboleedyada (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ra'iisal wasaaraha oo magacaabay xubnaha lagu darayo Guddiyada Doorashada Dowlad Goboleedyada (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal wasaaraha oo magacaabay xubnaha lagu darayo Guddiyada Doorashada Dowlad Goboleedyada (Akhriso)
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay xubnaha lagu darayo Guddiyada maamulaya doorashada maamul Goboleeyada dalka.
Wareegto kasoo baxday xafiiska Ra’iisal wasaare Rooble ayaa lagu magacaabay 15 xubnood oo maamul Goboleed kasta (3) xubnood lagu darayo Guddiyadiisa Doorashada, waxaana ay ka mid ahayd heshiiskii doorashada ee Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Maamul Goboleedyada dalka.
Puntland iyo Jubbaland ayaan weli soo magacaabin Guddiyarada Doorashada heer Dowlad Goboleed, iyadoo ay guddyadii ay hore u magacawday dowladda Federaalka ka hor yimaadeen musharixiinta mucaaradka.
Previous articleDowladda Itoobiya oo soo saartay Amar lagu xirayo Jeneral Gabre iyo 75 Sarkaal (Akhriso Liiska Magacyada)
Next articleXukuumadda Somaliya oo la wareegtay Doorashada Xidhibaannada Banaadiriga (Akhriso Magacyada Guddiga)